IOS9| मा फिर्ता अनडु गर्ने सुविधा कसरी असक्षम गर्ने आईफोन समाचार
जब हामी हाम्रो कम्प्युटरको अगाडि काम गर्दैछौं र कुनै पनि कारणका लागि हामी परिवर्तन गर्छौं जुन पछि हामीलाई मनपर्दैन, हामीसँग सधै विकल्प सम्पादन मेनूमा जाने र अनडु विकल्पमा क्लिक गर्ने विकल्प हुन्छ। यो विकल्प सामान्यतया हुन्छ धेरै उपयोगी जब हामी यसलाई आकार दिन को लागी केहि पाठ सुधार गर्दै छौं तर हामीले उसलाई फेला पार्न सकेनौं। यस कार्यको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रयोग फेला पर्दछ जब हामी तस्वीरहरू सम्पादन गर्दैछौं र हामी विभिन्न विकल्पहरू परीक्षण गरिरहेका छौं कि कुन एक हो जुन हामीले वास्तवमा खोजिरहेको कुराको लागि उत्तम सूट गर्दछ। एक धेरै उपयोगी र व्यावहारिक समारोह।
आईफोनमा हामीसँग यो प्रकार्य पनि छ, तर अनुप्रयोगको विपरित हामी यस विकल्पलाई निस्क्रिय गर्न सक्षम हुन कुनै पनि प्रकारको मेनू पहुँच गर्न सक्दैनौं। यसको पहुँचको एकमात्र तरीका भनेको उपकरण हल्लाएर हो। पहुँचको उत्तम तरिका हुनुको साथसाथै यसले हामीलाई हामीले गरेको कुनै पनि अनजाने परिवर्तनहरूलाई छिटो अनडु गर्न अनुमति दिन्छ। यदि हामी कामको लागि वा घर जाने बाटोमा हुँदा हामी अक्सर आफ्नो आईफोनमा लेख्छौं भने यो प्रकार्य उपयुक्त छ।
अर्कोतर्फ, यदि हामी आफ्नो फोनको साथ प्रयोग गर्छौं भने लेख्नको लागि चाहिदैन, यो सुविधा समाधान भन्दा समस्याको अधिक हो। भाग्यवस हामी यसलाई निष्क्रिय गर्न सक्दछौं कि प्रत्येक पटक जब हामी फोन सामान्य भन्दा बढी हल्लाउँछौं, यो प्रकार्य पर्दामा देखा पर्दछ। IOS को अघिल्लो संस्करणहरूमा यसलाई निष्क्रिय गर्न सकिदैन जबसम्म हामी श्याकटोन्डो जस्तो ट्वीकको लागि सहारा लिदैनौं।
सुविधालाई अनडु गर्नका लागि बन्द गर्नुहोस्
सबै भन्दा पहिले हामी मेनू जानु पर्छ सेटिंग्स.
भित्र सेटिंग्स हामी विकल्प खोज्नेछौं सामान्य.
अब हामी क्लिक गर्न मेनू को तल जान्छौं पहुँचता.
एक पटक पहुँचता भित्र हामी विकल्पमा जान्छौं अन्डु गर्नका लागि हिलाउनुहोस् र हामी यस प्रकार्यलाई निष्क्रिय गर्न ट्याब सार्दछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS9» IOS9मा फिर्ता अनडु सुविधा कसरी बन्द गर्ने
एप्पल पहिले नै डुअल क्यामेरा प्रोटोटाइपको परीक्षण गर्दैछ